हृदयघातबाट बच्न यसरी ध्यान गर्नुस र अमुल्य जीवन जोगाउनुस (भिडियोसहित) « Pana Khabar
हृदयघातबाट बच्न यसरी ध्यान गर्नुस र अमुल्य जीवन जोगाउनुस (भिडियोसहित)
प्रकाशित मिति : Jan 6, 2018
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अमेरिकामा वर्षेनी ६ लाख भन्दा बढीको हृदयघातकै कारण मृत्यु हुने गर्छ ।
ध्यानको माध्यमले हृदयघात नियन्त्रणमा ल्याउन सकिने बैज्ञानिक अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ । हृदयघातबाट बच्न ध्यानले कसरी मद्दत पुर्याउँछ भन्नेबारे ध्यान अभियानकर्ता विकास खनालसँग गरिएको कुराकानी ।
ध्यान गरेर हृदयघातबाट कसरी बच्न सकिन्छ ?
म मेरो अनुभवबाटै यो प्रश्नको उत्तरमा जान्छु । केही बर्ष पहिले मलाई सुतिरहेको बेला मुटुमा असजिलो महशुश हुन थाल्यो । तत्काल उठेर ध्यान गर्न थालेँ । करिब आठ वर्षदेखि आफूले ध्यानगर्न थालेकै कारण हृदयमाहुने असजिलोपनलाई समयमै नियन्त्रण गर्नसकें । ध्यानगर्न थालेको आठ वर्ष भएपनि मैले यो कुरा महशुश गरेकै थिइनँ । राती सुतिरहेको अवस्थामा मुटुमा असजिलो महशुश हुन थाल्यो । त्यसबखत घरमा कसैलाई नभनी ढोकाबन्द गरेर ध्यान गर्न थालें । दुखाइ आफै ंकम हुँदै गयो । यदि त्यो समय मैले ध्यान नगरेको भए आज कुनअवस्थामा हुने थिएँ म कल्पनासमेत गर्न सक्दिन ।
त्यसो भए ध्यानकै सहायतामा हृदयघातबाट बच्न सकिन्छ ?
हाम्रो मष्तिस्कबाट निस्कने सेरोटोनाइननाम गरेको तत्वले तनाव हुन दिँदैन । त्यस्तैगरि मष्तिस्कबाटै निस्कने कोरिस्टोलनामको अर्को तत्वले नकारात्मक विचार तथा अन्य समस्या उब्जाइदिन्छ । हाम्रो मष्तिस्कमा हुने न्यूरोनले यी तत्वहरुको सन्तुलनलाई मिलाउने गर्छ । मष्तिस्कमा यी तत्वहरुको सन्तुलन तलमाथि हुनेवित्तिकै हृदयघात हुने हो । मष्तिस्कमा हुने यही असन्तुलनलाई ध्यानले नियन्त्रणमा ल्याउँछ । जसकारण हृदयघातबाट समयमै बच्न सकिन्छ ।
त्यसैकारण यो आफूमा भएको व्यक्तिगत अनुभव अरु धेरै मानिसले बुझ्न सकुन् र ध्यानलाई वास्ताविकजीवनमा परिचालन गरुन् भन्ने मेरो आशय छ ।
सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा ध्यान के हो ? ध्यान गर्ने वातावरण कस्तो हुनुपर्छ ?
मानिसको मष्तिस्कमा कुनै पनि किसिमका तरंग र विचार(सकारात्मक या नकारात्मक)लाई विस्तृत रुपमा गरिने अध्ययनलाई ध्यान भनिन्छ । ध्यानका लागि शान्त ठाउँ चाहिन्छ भन्ने धेरैको बुझाइ छ । तर, ध्यानको लागिकुनै निश्चित ठाउँको आवश्यकता पर्दैन । ध्यान जहाँ र जहिले गर्न सकिन्छ । फिल्म हेर्दा पनि हामी ध्यानमै हुन्छौं । तीन घण्टा फिल्म हेर्दा हामीले समय वितेको पत्तो पाउँदैनौ । यसको अर्थ हामी फिल्म हेर्दा होसमा हुँदैनौ । त्योे अवस्था नै ध्यान हो ।
ध्यान गर्ने वीधिहरु केके हुन् ?
ध्यानका पनि आफ्नै विधीहरु छन् । सामान्य रुपमा ध्यान कसरी गर्ने भन्दा, ‘पलेटि कसेर बस्ने हातको मुद्रा मिलाउने, आँखा बन्द गर्ने या खोल्ने र श्वास प्रस्वासलाई ध्यान दिइरहने । ध्यान गर्दै जाँदा ती सबै नियमहरुकको आवश्यक्ता कम हुँदै जान्छ र ध्यान आफैं हुन्छ । तर, गुरुको सहायता बिना एक्लै ध्यान गर्नु भनेको मुर्खताजस्तै हो । गुरुको सहायता बिना ध्यान गर्दा ध्यानबाट बाहिर आउन नसकेर दिमागी सन्तुलन बिग्रीएका पनि धेरै त्यस्ता घटनाहरु देखेको छु । पछि त्यो अवस्थालाई ध्यानकै माध्यमबाट सुधारिएका छन् ।
ध्यानका फाइदाहरु के के छन् ?
ध्यानको बेफाइदा छैन, जे छ फाइदै फाइदा छ । यसले हामीलाई आत्मसम्यम बनाउँछ, करुणाको भाव जगाउँछ । ध्यानले नकारात्मक विचारबाट टाढा बनाउँछ ।
मानिसको जीवनसँगै अपरिहार्य बनेर जोडिएको तनावलाई पनि ध्यानले व्यवस्थापन गर्न सक्छ । सर्वप्रथम हामीले तनाव कसरी हुन्छ भन्ने कुरा जान्नु जरुरी छ । मनमा अनावश्यक इच्छा राखेपछि तनाव सृजना हुन्छ । असंख्य चाहना बढ्नुले पनि तनाव उत्पादन गर्छ । हामीले सक्ने चाहनामात्र राख्नुपर्छ । यसका साथै चाहनालाई व्यवस्थित गर्ने क्षमता पनि हामीमा हुनुपर्छ । चाहना छ भन्दैमा चाहेको चिज तत्काल गर्न सकिदैंन । हामीले गर्न नसक्ने र वशमा नभएको कुरामा बढी ध्यान दिन्छौं जसले गर्दा तनाव हुन्छ । त्यसलाई ध्यानले नै कम गर्न सक्छ ।
हाम्रो मष्तिस्क नै हाम्रो ठूलो शत्रु र मित्र भएको हुनाले यसलाई राम्रो मित्र बनाउने काम ध्यानमार्फत मात्र हुन सक्ने हुनाले ध्यानलाई दैनिक जीवनमा उतार्न जरुरी छ ।
प्रकाशित मिति: २०७४ पुष २२ ,शनिबार
किन नारीले महिनावारी हुदा बार्नु पर्छ भनिएको हो सनातन धर्ममा ? (भिडियो)
किशोर-किशोरीहरुलाई डा.अरुणा उप्रेतीको सुझावः जथाभावी यौनसम्पर्क गर्दा ज्यानै जानसक्छ (भिडियो)
उच्च रत्तचापको कारण गर्भावस्थामा देखापर्ने ईक्लेम्पसियालाई सामान्य रूपमा लिनुहुँदैन
चिसोबाट कसरी बच्ने ? डा. अरुणा उप्रेतीका टिप्स
बेसार मानव स्वास्थ्यका लागि प्रकृतिको ‘वरदान’ हो
योनीद्वार वरिपरि पलाएको मासुको उपचार कसरी गर्ने ? यस्तो छ केहि सुझावहरु !